सजिलो इटालियन पास्ता रस्टिका पकाउनुहोस् | सडकको लागि एक युगल
फेब्रुअरी 10, 2019
इटालियन पास्ता रूस्टिका एक क्लासिक इटालियन डिश हो जसले हामीलाई प्रेम गर्दछ दुई प्रमुख सामग्रीहरूमा - parmesano reggiano र लहसुन!
जब तपाइँ नियमित रूपमा प्यासेन्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यस विधिमा, र धेरै हुनेछ, parmesano reggiano प्रयोग गर्दा एक फरक गुण समावेश छ। यदि तपाईं त्यसो गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, reggiano को प्रयोग गरेर धेरै मखमली बनावट र गहिरो स्वादिष्ट प्रोफाइल ल्याउनेछ।
यस नुस्खामा सब्जियां अविश्वसनीय महत्त्वपूर्ण छन्। ताजा मशरूम र ब्रोकोली प्रयोग गर्नुहोस्, केहि चीजको बेकिंग जस्तै कि ताजा भन्दा कम केहि अन्तिम डिश को लागी जुन "wilty" स्वाद हुन्छ, र वास्तवमा राम्रो स्वाद गर्दैन। तपाईंले पत्ता लगाउनुहुने सबैभन्दा ताजा सामग्रीहरूसँग तपाईं सबै चीज गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईं व्यञ्जनमा गलत जान सक्नुहुनेछैन!
यो एक आधारभूत, सजिलो, तर साँचो इटालियन नुस्खा हो, र हामीले रोम र नेपल्सको सडकमा मजा लिनुभयो! हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं यो मोटो क्लासिकमा बसोबास जस्तै हामीसँग छ!
यो पकाएको पास्ता क्रीममा, लसुन-पर्मेसन सस एक मनपर्ने इटालियन रेस्टुरेन्ट बाट मेरो डिश हो भनेर मेरो आमाले कसरी घर बनाउने भनेर सोचे।
कुक समय35 मिनेट
कुल समय50 मिनेट
सर्भरहरू:2मान्छे
1 कप पनीर पनीर
2 औंस क्रिमिनी मशरूम कटा
2 औंस ग्रील्ड diced चिकन स्तन (म यो फूड फूड्स मा जमे भएका बैग द्वारा खरीद गर्छन)
2 औंस केहि स्टेम संग ब्रोकोली फ्लोरेट्स खुट्टा र कटाई
2 औंस ham steak जस्तै Nueske ब्रान्ड, ¼ "पासा मा कट
2 औंस Mostaccioli या penne rigati पास्ता
2 -3औंस रातो प्याज वा सुइट minced / finely diced
1 -2वसा लौंग लहसुन minced
1 चम्मच नींबू-काली मिर्च
1 tablespoon प्रत्येक जैतून का तेल र नरम मक्खन प्याज र मासु पकाउने
साल्ट र जमीन काली मिर्च, स्वाद गर्न (म सीजनको रूपमा छु)
कुचल रातो कालो मिर्च, स्वाद गर्न
क्रीम, लसुन-पेर्मेसन ससका लागि
4 औंस ricotta पनीर या मस्कार्पोन
4½ चम्मच मेयोनेज
1 tablespoon भुइँमा लसुन
½ कप पनीर पनीर विभाजित
¼ कप दूध वा क्रीम
Preheat ओवन 300 ° F सम्म
ब्रोकोली फ्लोरेट्स 30 सेकेण्डमा हल्का नमकीन पानीमा ब्लक गर्नुहोस्, त्यसपछि ठोलो फ्लैश गर्न एक बर्फको स्नानमा डुब्न; पानीबाट हटाउनुहोस्। तपाईंसँग यो नुस्खाको लागि फ्रान्स ब्रेकोलीले ब्ल्याकली गर्न पनी छैन - यसले पहिले बनाइदिनु अघि ठुलो पार्छ। पास्तालाई अझै अल डेन्टेसन (अझै सम्म बिट फर्म) सम्म सुन्नुहोस्।
एक प्यासे प्रोसेसरमा सजिलै सम्म सजिलो हुन्छ। बाँकी पनीर मा हलचल, अलग।
जैतूनको तेल र मक्खनमा ठूलो ससनीपमा लाल-काली फ्लेक्सको साथ सुई, ताजा लसुन र मशरूम माथि नरम गर्नुहोस्।
खैरो मासु मा हलचल, त्यसपछि सबै केहि मा हलचल, ब्रोकोली, पकाया पास्ता र चटनी सहित; न्यानो मार्फत।
हल्का 1 आधामा पास्ता मिश्रण राख्नुहोस्- 2-क्वार्ट क्यासेरोल डिशमा। उदारतापूर्वक ग्रेटेड पिर्मेसन पनीरको साथ र 30 मिनेट बेक्यो।
तपाईले मनपराउनुभएको बाक्लो लसुन रोटीको छेउमा यसको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ, केवल कटोरामा बायाँका बायाँ उठाउन। यो एक उत्कृष्ट पकवान हो जुन तपाईं गलत गर्न सक्नुहुन्न - विशेष गरी यदि तपाईं छेउमा राम्रो इटालियन सेतो शराब सेवा गर्दै हुनुहुन्छ!
श्रेणी: युरोप, खाद्य र पेय, इटालियन, इटाली, मुख्य मार्ग, व्यञ्जनहरु टैग: खाना, इटालियन पास्ता, इटाली, व्यञ्जनहरु
← ठूलो सानो ब्रेकहरूको समीक्षा